Yarra Council - Leisure Centres and Neighbourhood Houses Somali
You are here: Home > Services > Leisure Centres and Neighbourhood Houses Somali Print Page
Leisure Centres and Neighbourhood Houses Somali
Xarumaha Madadaalada iyo guryaha Neighbourhood Houses
Degmada Yarra waxay leedahay xarumo madadaalo (jiimam iyo meella lagu dabaasho) oo ku yaalla Richmond, Collingwood iyo Fitzroy, meella goolafka lagu cayaaro oo ku taalla Burnley. Ama u isticmaal sida hadba aad u rabto, ama xubin ka noqo Xarunta Madadaalada taas oo kuu ogolaanaysa isticmaalida dhamaan saddexda xarumood iyo goobta goolafka.
Xarakaadyada la bixiyo waxaa ku jira: dabaasha, jiimka, barta carruurtu ku dabaalato, fasalada kooxda fiyoobida, biyo ku cayaarida, kooxda wada dabaalata, tababar shakhsiyeed, is-rogrogida, duugduugida jirka, goolafka iyo laysamada goolafka.
Xarunta Madadaalada Collingwood Geeska Turnbull and Hoddle Streets Clifton Hill
Fadlan ogsoonow: Goobta dabaasha ee Collingwood, goobta biyaha iyo goobta daryeelka waxaa la filayaa in la xiro ilaa dhamaadka 2011. Goobta jimicsigu waa furnaanaysaa waqtigaas.
Harada Dabaasha ee Fitzroy Alexandra Parade, Fitzroy
Goolaf Kooraska Burnley Geeska Madden and Loyola Grove Burnley
Degmada Yarra waxay hoy u tahay sagaal Neighbourhood Houses kuwaas oo maalgelin ka hella Golaha degmada. Neighbourhood Houses waa meelaha aad ka helli karto caawimada, waxbarashada, aad ku samaysan karto saaxiib kuna baran karto xirfada cusub. Waa meella amaana oo dad ku soo dhowaynayaa ay joogaan kuwaas oo badanaa soo dhoweeya dadka cusub waxayna siiyaan barnaamijyo dadka aan ku hadlin afka Ingiriiska asal ahaan.
Xarakaadyada qaarkood waxaa ka mid ah: kooxaha wada cayaara, tooyiska maktabadaha, aqoon-is-weydaarsiga, xiisadaha kumbuyuutarka iyo luqadaha, caafimaadka iyo fiyoobida, heesida, kaalmada iinta, jardiina hagaajinta, iyo ka sii badan.
Xarunta Bulshada ee Alphington Community Centre 2 Kelvin Road, Alphington
Macluumaad intaan ka badan oo ku saabsan xarumaha madadaalada iyo xarumaha Neighbourhood Houses ee ku yaalla Yarra, fadlan wac Golaha tel: 9205 555 ama booqo www.yarracity.vic.gov.au. Waxaad kaloo la hadli kartaa qof ku hadla afkaaga adoo wacaya adeega tarjumaada ee Golaha tel: 9280 1940.
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan adeega turjubaanka, wac 9280 1940 weydiina qoraalka Yarralink ama booqo www.yarracity.vic.gov.au